Abalungisa izinwele beCentro Storico Willy's Art - uGenova
Uhlelo oluqhubekayo: 09: 00-19: 00
Abalungisa izinwele "Isikhungo Somlando sikaWilly" - Isikhungo Somlando - iGenoa
Okuphezulu ukunakekelwa nobuhle bezinwele zakho.
4.8 /5 amavoti (amavoti angama-410)
Abalungisa izinwele esikhungweni esingokomlando di Genoa nomnikazi ongumdwebi wangempela olungele ukunika ukukhanya nesitayela sakho capelli: lokhu "Ubuciko bukaWilly"Umphathi we-salon, uthweswe iziquILigustica Academy Yobuciko Obuhle,, wazalwa njengoPainter, Photograph kanye ne-Master of Arts wase waba isitayela sezinwele futhi ulethe lonke ithalente lakhe nobuciko kulo mkhakha.
Abalungisa izinwele esikhungweni esiyingqophamlando seGenoa: "Ubuciko bukaWilly" bukhomba ukubukeka kwakho
Izinwele esikhungweni somlando di Genoa ngesizinda nokuqeqeshwa okubanzi ngaphakathi insimu yobuciko, umnikazi we "Ubuciko bukaWilly"yangempela umculi ukuqedela lokho, sibonga ukuqeqeshwa okuthuthukile okutholakele emkhakheni we Ubuciko obuhle, kuholela ezweni le Izitayela zezinwele amakhono aphezulu kakhulu wobuciko futhi uwabeka ekukhonzeni ubuhle bezinwele zakho. Baqinisile i capelli ukumela lo mculi izinto ezingavuthiwe okufanele zisetshenziswe, isithombe, ukwakheka, ukwakheka kombala kanye nombala. Yenza ngokwezifiso ukubukeka yeklayenti ngalinye elilandela izici zalo zomzimba nezokuziphatha, kwesinye isikhathi ukuthuthukisa i- "defence" kuliguqula libe "amandla", kungukuvela kokudala kwaleli khono Isinwele. Ngemuva kweminyaka yezikole zezobuciko, iminyaka ecishe ibe ngamashumi amabili uthuthe konke ubuciko nobuciko bakhe imibala, kumumo namavolumu egumbini lakho lokuphumula: "Abaluki bezinwele bakaWilly”Itholakala enhliziyweni Genoa ukulahlwa kwetshe kusuka ku ISonto LaseSan Lorenzo.
Abalungisa izinwele esikhungweni esiyingqophamlando seGenoa: Ubuciko bukaWilly ngumdwebi ophonswe itshe kusuka eKhathedrali yeSan Lorenzo
Abalungisa izinwele esikhungweni esingokomlando seGenoa abesifazane nabesilisa, "Ubuciko bukaWilly", sibonga uPastion ngobahair Care futhi njalo ngifuna imikhiqizo engcono kakhulu ye Ukunakekelwa kwezinwele futhi we Umbala wekhwalithi futhi isebenza kakhulu, iqinisekisa imiphumela emihle yokuthuthukisa isithombe sakho ikunikeza ukubukeka kwamanje kakhulu okubonisa ubuntu bakho. Ngisho ukubukeka kwendoda kwi-salon yethu kuhlala kuphezulu, ngisho nakwezokuqamba haircuts enesithunzi "Razor Fade", ngemihlobiso ethile eyenziwe i-razor. Umgomo oyinhloko we Ubuciko bukaWilly, a IGenoa ukudala ukubukeka okungafani nekhasimende ngalinye, ukuthuthukisa izici zomuntu zobuso kanye nesakhiwo semvelo se amahlamvu ngokuvumelana kwe ukusikwa okukhethekile nombala futhi ezenziwe ngezifiso kakhulu futhi kube lula ukubaphatha noma bebodwa ekhaya.
ILa Cura del Capello enkabeni yomlando yeGenoa - Ubuciko bukaWilly buzokwenza izinwele zakho zikhanye
Ukuchaza Ubuciko bukaWilly un Izinwele zezinwele zowesifazane nowesilisa kunciphisa ngokweqile, cabanga nge amakhono aphezulu okudala othulwe kulo mkhakha ngumnikazi wethalente. Ngaphezu kokuqamba, ngaphezu kwalokho, ukunakwa okukhethekile kuyakhokhelwa futhi isikhumba esiphilile ngoba ivela koyedwa isikhumba esiphilile lokho kuzalwa a Capello muhle, uqine futhi uqhakazile. Njalo ukwelashwa ngamakhemikhali noma nge-stylistic kuphishekela le nhloso. Siyazivikela i capelli ngaphambi, ngesikhathi nangemva kwensiza ngayinye imibala, unomphela, ukuqhuma o ukusina. Lokhu, I-Salone isebenzisa phezulu kwemikhiqizo, entsha kakhulu futhi i-avant-garde yona, ehlongozwe yithina ngaphambi kokuba abanye bazi izinzuzo, ngoba sihlala silinyathelo elilodwa olwazini nasekufundweni kwehair Care. Ukwelashwa kwe ukwakhiwa kabusha kwezinwele waya keratin umele elinye iphuzu eliqinile le-salon, ukwelashwa ngakunye kwenza Capello yakhelwe kabusha futhi yavuselelwa ngokuphelele.
Abaluki bezinwele bakaWilly: Imibala, Imibala eqondile kanye Nezitayela eziphezulu zezitayela zezinwele
Imikhiqizo esetshenziselwa i ukufaka umbala wezinwele mayelana nempilo, ubuhlakani nokubamba kumane nje kungukuhamba phambili. Futhi i imibala qondisa ukudlala ngemibala eqine okubonakele ukuthi ihlala isikhathi eside kunawo wonke amabhuku akhona lapho. Zonke ngaphandle kwe-ammonia ne-patent, zinothile ku lipids ezisiza ukuthola eyodwa imibala yemilingo yemfashini kukhanya kakhulu ukuthi noma ngubani uzomangala. Avant-garde ngokuphelele futhi Umkhakha wezemfashini, minyaka yonke kuba nezibuyekezo eziningi ezenziwa ngumnikazi nabasebenzi ukuze baqinisekise ubunyoninco babo. willy ubekhona I-Colorzoom IBerlin, Stockholm neVienna; abasebenzi bafunda izifundo ku Imfashini ephezulu isibabule zezinwele okwamanje okuningi, kulungele zombili abashadikazi abantu abasha abangafuni ukwakhiwa okuhle kakhulu abashadikazi esikhundleni salokho othanda ukudlala ngamanani ayinkimbinkimbi ngokwengeziwe, imilo nama-sinuosities. THE ukusikeka zihlala zisesikhathini sokubonga izifundo eziqhubekayo eMilan naseLondon ezinikeza ithuba lokwazi amaqoqo wabakhiqizi bomhlaba futhi bawabuke kuqala e-salon.
Ikheli: Nge-Scurreria, 23R
Ucingo: 010 2512753
Iwebhusayithi: www. wliwebsite-artrucchiere.business.site
Inombolo ye-VAT: 02082810991